အင်ဂျင် HEAT တက်တာ မဟုတ်ဘဲ ဘာလို့မီးခိုးလိုက်ရတာလဲ . . . ? – BUDOZAR
အင်ဂျင် HEAT တက်တာ မဟုတ်ဘဲ ဘာလို့မီးခိုးလိုက်ရတာလဲ . . . ?
ကားဘောနက်စ်အောက်ကနေမီးခိုးတွေထွက်လာတာက Heat တက်တာတစ်ခုထဲကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်..??
✅ထွက်လာတဲ့မီးခိုးနံ့က ကတ္တရာညှော်နံ့ဆိုရင်တော့ ဆီကိုလောင်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဂတ်စ်ကတ်ပျက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်…
✅ကားအဟောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ မီးခိုတွေကဆီအဖုံးနေရာက ထွက်လာနိုင်ပါတယ်… ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဆီဖြည့်ချိန်တိုင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ဆီအကြွင်းကျန်တွေ စုပုံလာပြီး အင်ဂျင်ပူလာတဲ့အခါ လောင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်… ပစ္စတင်ဆလင်ဒါထဲမှာရှိတဲ့ အဆို့တွေပျက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်…
✅အမဲရောင်မီးခိုးတွေထွက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ လောင်စာဆီတွေက ကောင်းမွန်စွာမရောစပ်ထားလို့ပါ… အတွင်းထဲကိုလေသယ်ယူပေးတဲ့စနစ် ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် လောင်စာအရောထဲကို လေမရောက်တဲ့အတွက် လောင်စာများလွန်းပြီး အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်… လောင်စာဆီဆင်ဆာပျက်နေချိန်မှာလည်း ဒီလိုပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်…
✅ကားထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေရင်လည်း အငွေ့ပျံပြီးမီးလောင်ခြင်း၊ Coolant အရည်မီးလောင်ခြင်း၊ ပါဝါစီယာတိုင်အရည် သို့မဟုတ် ဂီယာဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး မီးခိုးလိုက်စေပါတယ်… ဘယ်လိုယိုစိမ့်မှုမျိုးကိုမဆို အသေအချာကိုင်တွယ်ပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်…
✅နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပေမယ့် လျှပ်စစ်စနစ်ကြောင့်လည်း မီးခိုးထွက်နိုင်ပါတယ်… အော်တာနေတာ (Alternator) ပျက်သွားတာ၊ တိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အဖြူရောင်မီးခိုးငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်….
Credit # Matador Lubricants